ady lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
niasa an-tànany? Aza maika hihazakazaka ka mitady ny zavatra mba ho ny punching kitapo. Tsara kokoa ny hampihenana ny ambaratongam-fihetseham-po, manomboka ny hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto ady. Tianao ve ny handresy ara-drariny milalao raha mbola manompo ao amin'ny peratra Samy te amin'ny karate, mpanao ady totohondry, Sumo wrestler. Mety sy tolona, ​​izay ny ady dia niaraka tamin'ny Hierona sy ny fotoana mamirapiratra hampitahorana ny fahavalo. Na izany aza, ny eny an-dalambe ihany koa ny ady efa nanome. Tsy misy sazy avy amin'izany, nefa tsy misy antoka ny fiarovana, satria ny fitsipika tsy manana ny mitovy – iza no matanjaka kokoa, mailamailaka kokoa, ary Izy no handresy.
Kogama: Solon'ny kristaly
Ady lehibe thumb
Kogama: Adventure Adventure
Slenderman vs Freddy Ny Fazbear
Troll Ady Totohondry
Kogama: Loko mifangaro
Hero mahery fo totohondry: Tompondaka Punch
Kogama: niala tao am-ponja
Jeff The Killer mahatsiravina
Stickman Simulator: Ady farany
Andriamanitry ny Arena
Princess Goldblade Ary Waters The Mampidi-doza
Lalao Slap Face
Lalao ady tamin'ny Category:
Farany ady lalao
Battleman Heroes Battle
Fiarovana ny tanàna
Ady ho an'i Cubeland
Ady ho an'i Azalon
Famonjana mahery fo
Polisy mpiambina Vs miady
C. A. T. K Crash Arena Turbo Stars
Lalao Online Rehetra ady lalao
Tsara ny hilalao ao amin'ny ady virtoaly noho ny tena
Ny lahy dia mahafantatra tsara fa taorian'ny fifandonana tamin'ny mpiara-mianatra foana hotsarain'ny olon-dehibe. Dia hanozona, fihenan'ny fa ny fitondran-tena maharikoriko, mba hahaliana ny amin'ny feon'ny fieritreretana sy hanerena ny fahavalo ho avy ny tokony homarinana avy amin'ny. Ray aman-dreny, mpanabe sy ny mpampianatra dia tsy mety manatsara hoe iza no diso ary nahoana ny ady nanomboka. Mila Mangina ny ady tsy misy fanazavana bebe kokoa. Na dia naratra, rehefa miezaka mafy mba hanohana ny rariny, ary ho anareo izany koa voasazy. Zavatra no somary miavaka eo amin'ny tontolo virtoaly, izay afaka manana lalao ady tsy amin-tahotra ny vokany. Sary an-tsaina ny sambo ao ny tarehin'ny izay nampiharina ny fanevatevana anao, ka hanasazy azy tamin'ny ady ara-drariny.
no nofidina mba hampianatra ny fomba mendrika
Noho ny fahasamihafan'ny foto-kevitra Ady lalao azo nifidy isaky ny dika vaovao ny zava-nitranga mba hifaninana silushkoy.
miaramila sy ara-toekarena paikady
Ny eny an-dalana sy ny sekoly fifandonana
Ny fantastically mifono zava-miafina ady
Ny maoderina, fahiny sy tamin'ny Moyen Âge ady
Tahaka ny ankizilahy milalao ao amin'ny ady dia manomboka saika mbola zazakely, lalao an-tserasera ihany koa ny nanome ho an'ny isan-taona. Tsy manan-tsiny miady ho amin'ny madinika ho tsy misy fandatsahan-dra sy ny sariitatra anjara, voankazo, ary na dia ny ady amin'ny rano na ny savony ka manjary miboiboika.
dia lasa mahazatra ny andiany Super Mario, Sonic ny sokina, Bombermene. Heroes handresy vato misakana, manorotoro azy amin'ny totohondry na ny zavatra, mampiasa ody sy ny asa tanana fanampiana. Ny lalana mamakivaky toerana maro loko, izay tsy maintsy hanana fandrika, ary afa-tsy hihaino azy sy ny fanehoan-kevitra Superman dia hamela tanteraka ny lalana amim-pahamendrehana.
mpankafy an'i tetika lalao maimaim-poana dia mankasitraka ny ady, izay nisy filaharana ny asa, fahaiza-manao, hevitra mirindra fanapahan-kevitra. Niady tamin'ny fahavalo miaraka amin'izay koa mampitombo ny toe-karena, hanorina trano sy ny mamarana fifanekena miaraka amin'ny namana mpiara-monina.
Ao amin'ny fanatanjahan-tena, dia misy fitsipika hentitra, ary ny fomba hijery aterineto haiady tsy manao, dia tsy maintsy mitoetra amin'ny toe-javatra, raha tsy te-hahazo ny sazy. Ny fandresena ho any ho an 'ireo izay nahavita ny ho tafita velona kokoa ny fihodinana sy baolina hevitra indrindra. Fa dia tena zavatra hafa, raha manapa-kevitra ny manaporofo ny fahamboniany eo amin'ny ady eny an-dalana. Fitsipika Tsy ato Izy, fa Midika izany fa tsy izy ireo noho ny mpifanandrina. Fandresena matanjaka sy hafetsena, ary voarara ny fampiasana ny fomba rehetra mety ho misy fitaovana.
Mariho tia haiady, izay tombontsoa dia faly ny tamin 'ny fotoana sy ny sarimiaina Manga. Ankehitriny ianao tsy manana zatovo Mutant Ninja sokatra, sy Ninja Mandehana, ny malaza Naruto sy Ben 10. Izy ireo hiady amin'i zombies mifampizaka sy dia ny vokatry, nanapaka ny sabatra maranitra ny vitaminina salady. Modern mpamono olona mainty dia tsy voafetra ho fitsikilovana sy miady eo amin'ny tany sy mora ny handresy toerana sy mianatra hahafehy misy foto-kevitra, mamadika izany ho fitaovam-piadiana.
Mitolona lalao ho an'ny ray sy ny zanany
Ny olana ny fifandraisana ray sy ny zanany nanjavona, rehefa misy ny fahafahana hilalao ny lalao ady. Sary an-tsaina fotsiny inona no ho mampientam-po sy tsy hay hadinoina tamin'ny iray ora lany tanteraka akaikin'ny fibodoana ny solosaina! Ady roa dia tsy fahita firy intsony, ary faly isika hanatitra ny vokatra isan-karazany, mba hampihavana ny fifandraisanareo. Ary raha mbola any am-piasana dada, dia afaka mandeha hiady amin'ny rahalahiny, na ny namanao, ary miaraka amin'izay koa, mba hanafanana, mba mampihatra sy hone ny fahaizana izay mitaky izany. Ady dia tsy voatery ho ratsy fa tsy foana ny herisetra. Tena fomba iray be loatra manala ny hery, ny fahazoana ny faharetana, matanjaka sy ny fahaizany mamikitra, ary ny fahaizana hiaro sy hiarovana dia mety ho ilaina amin'ny fotoana rehetra.